အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Posts Tagged "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသည်းကွဲသောနေ့"	18
Comments By Postသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - ဦးဦးပါလေရာ - မင်းမင်းမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - ကိုရင်စည်သူ - ဦးဦးပါလေရာ``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - weiweiအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မင်းမင်း - Munetezမကြာမီအချိန်အတွင်း ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်းကြောင်းထဲ၌ ဂြိုဟ်တုများ လောင်စာဖြည့်တင်းနိုင်တော့မည်လော - မင်းမင်းပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မည့် နာနိုဆေးပညာ - မင်းမင်း - Ma Maရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - weiwei - ရွှေတိုက်စိုးအတု - Munetez - မောင် ပေ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - Munetez - Munetezနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities